Umqulu wePakethe Boeing_B737-823_Advanced_VC_FSX _ & _ P3D
umbuzo Umqulu wePakethe Boeing_B737-823_Advanced_VC_FSX _ & _ P3D
iinyanga 1 kunyaka 7 eyadlulayo #698 by Goodjohn80
Ufumene le ndawo enkulu kwaye ukhutshwe ipakethe ekhankanywe ngasentla kodwa akukho ncwadana ekhoyo ifakwe. Naliphi na iimbono apho ndingayifumana khona incwadi?
iinyanga 1 kunyaka 7 eyadlulayo #699 by FlankerAtRicoo
Ndiya ku-Google yeProjekthi ye-OpenSky (imodeli yendiza), u-Alejandro Rojas Lucenda (umzekelo weVC), ngaphandle kwe-Honeywell FMC
Efuna i-plan-flight plan yangaphambili.
Impawu zendiza aziyi kuba kude ne-FSX ye-B737_800 ....
Themba oku kuyanceda.
I-PS: Le ndawo yindawo enhle kwaye kulula kakhulu ukuhamba njenge-wel.
Ixesha ukwenza page: 0.324 imizuzwana